Ny kalesy Manokana sokajy mpandeha
Bevohoka ny vehivavy no mitondra ny fahazoan-dalana ara-pitsaboana (taratasy) manamafy ny fitondrana vohoka sehatra tamin’ny ny daty ny lasa.
Bevohoka ny vehivavy ao amin’ny dingana herinandro sy ny maro hafa dia mitondra ireo vehivavy bevohoka-tsoratra sy ara-pahasalamana ny fahazoan-dalana avy amin’ny dokotera izay ahitana ny manaraka izao:
Ny ankizy ny taona dia tapa-kevitra ny daty ny travel fiandohan avy amin’ny seranam-piaramanidina niaviany izay voalaza ao amin’ny Fepetra momba ny Kalesy.
Ny olon-dehibe manana zo hitondra ny ankizy iray taona latsaky ny taona izay dia ny fandehanana maimaim-poana tsy misy azy ihany seza.
Olon-dehibe iray dia tsy maintsy ny zaza taona eo ambanin’ny nyazy am-pofoany nandritra take-off, fiakarana, ny taranaka sy ny fipetrahana.
Misy fameperana mikasika ny isan’ny ankizy latsaky ny taona eo ihany sidina: CRJ — ankizy MAX.
Ankizy latsaky ny taona (ny olom-pirenena ao amin’ny Federasiona rosiana) dia afaka ny hivoaka any ivelany, mifanaraka amin’ny lalàna ao amin’ny Federasiona rosiana. TANDREMO: ara-Batana fanamby mpandeha manan-jo hanapa-kevitra momba ny fandehanana amin’ny alalan’ny rivotra tsy miankina araka nyazy ara-batanaara-tsaina toe-javatra. Mitondra dia tsy ho mendrika noho ireto sokajy manaraka ireto mpandeha amin’ny raharaha ara-pitsaboana loza tao an-tsambo. Travel Waiver (voasoratra form) dia ho vita amin’ny check-in. TSAROVY: Tsy ampy ny fanombanana ny mpandeha ny fahasalamana atao hoe loza mitatao ho azy ny fiarovana ary koa ho an’ny mpiara-mpandeha sy mpiasa an’habakabaka ny mpikambana.»PRM»- (Olona Mihena ny fahafahany Mivezivezy) — olona izay manana ny fivezivezena dia voafetra noho ny ara-batana (sensory na moto, ny mitaiza na vonjimaika) tsy fahampian’ny, olona fantatra judicially toy ny tsy mahavita, vokatry ny fahasembanana ara-tsaina ny faharanitan-tsaina korontana na miatrika zava-tsarotra eo maka sary an-pitiavana, amin’ny fifehezana ny fitondran-tena, ny olona amin’ny taona mifandray amin’ny fiovana, ary olona manana sata ara-pahasalamana dia mitaky mety fanohanana sy ny sampan-draharaha Manokana ny zavatra ilaina manokana ny mpandeha. Ny filana manokana manana ny zo mpandeha fanompoana voasokajy araka ny fehezan-dalàna manara-penitra ny asa ny Fikambanana Iraisam Rivotra Fitaterana IATA (Iraisam-pirenena Rivotra Fitaterana ny Fikambanan’ny) toy izao manaraka izao: Mialoha ny sidina fandaharana dia ilaina ny manome travel ny ara-batana fanamby mpandeha. Mety hifandray antsika ny varotra birao na amin’ny telefaonina tsy taty aoriana noho ny ora mialoha ny fiaramanidina
Noroahina mpandeha (administratively voahilika avy amin’ny firenena) ary ny mpandeha izay nandà tsy hiditra ao amin’ny Firenena dia tsy maintsy hiverina any amin’ny teboka fiaingàna. Ny Taratasy fanamarinana ny Hiverina ho voasariky ny manam-pahefana. Ny tapakila dia azo avoaka ao amin’ny tany ny Taratasy fanamarinana ny Hiverina. Mitondra dia tsy ho mendrika noho ireto sokajy manaraka ireto mpandeha. Mpandeha tsy maintsy mandoa ny hiverina tapakila teo anazy ny vola. Ny saran-dalana ampiasaina amin’ny teboka niaingany dia nonrefundable. Mitondra, mitondra ny lohateny hoe mampiasa vola aloa ny mpandeha na ireo fikambanana izay nividy ny tapakila ho ny farany, ny maha manan-danja ny saran-dalana fandrakofana.
Nandà Teny ny Mpandeha dia hanomezana vola ny Mitondra ny fandaniana rehetra hitsangana avy toy izany ny kalesy (sakafo, trano, famindrana, ny rivotra tapakila sns.).
Tao amin’ny seranam-piaramanidina lasa Premium -toe-Karena kilasy mpandeha dia ho teny,-ao amin’ny manokana voatendry ho birao. Premium -toe-Karena kilasy mpandeha ny farany ny birao. Raha atao Premium-toe-Karena kilasy mahazo ny mpandeha tao anatiny misaraka amin’ny kilasy ekonomika mpandeha.
Tao amin’ny seranam-piaramanidina lasa Premium -toe-Karena kilasy mpandeha dia mety ho nanolotra ny maka tombony amin’ny raharaham-barotra fandraisam-bahiny fanompoana (raha misy hita ao amin’ny seranam-piaramanidina).
Tao an-tsambo fiaramanidina iray ny Premium -toe-Karena kilasy mpandeha dia omena amin’ny seza ao amin’ny andalana roa voalohany ary kokoa sakafo asa fanompoana.
Raha atao amin’ny seranam-piaramanidina ny toerana manokana ny fitaterana dia omena mba hitondra Premium-toe-Karena kilasy mpandeha ny terminal.
Fandraisam-bahiny raharaham-barotra ny asa fanompoana dia tsy omena satria premium-toe-karena kilasy ny mpandeha tao amin’ny seranam-piaramanidina ny toerana halehany. Eo amin ‘ny mpandeha’ tonga tao ny famindrana na fitaterana hevitra izy ireo dia nampita ny terminal ary koa ao amin’ny birao mialoha ny mpandeha hafa. TANDREMO: Entana an’ny Fitaterana na ny Famindrana ny Mpandeha dia ho voamarika amin’ny fanampiny famantarana tag.
Raha ny famandrihana ao amin’ny fehezan-dalàna-dia nizara fiaramanidina ny mpandeha dia ho nilaza mialoha momba ny Mitondra miasa manokana ity fiaramanidina.
Ho an’ny mpiara sidina niasa tamin’ny hafa airlines, Mitondra mametraka ny tahan’ny ho an’ny entana vola fanampiana sy ireo sampan-draharaha manokana.
Fehezan-dalàna-dia nizara sidina dia voalaza miaraka roa na maromaro mari-pamantarana na ny mpandeha ny tapakila sy ny birao vaovao tao amin’ny seranam-piaramanidina. Tena zava-dehibe ny olona (VIP) ireo olona mitazona malaza fitondram-panjakana, ara-tsosialy, ara-politika, na ara-pivavahana, ny toerana sy ny fandraisana feno tombony manokana ny tombontsoa avy amin’ny Sambo.
Mitondra ara-potoana mampahafantatra ny mpandeha VIP, ary ireo olona nanatrika VIP momba ny fialan’nytonga ny fotoana, hanampy amin’ny mandalo seranam-piaramanidina fombafomba, amin’ny check-in ny fomba fiasa sy ny fitehirizana entana.
Ny fanompoana ny mpandeha ao lounges ho an’ny mpiasam-panjakana sy ny delegasiona ny VIP dia omena eo ambanin’ny fangatahana mialoha ny manam-pahefana.
Ny mpandeha VIP, dia tonga tao amin’ny seranam-piaramanidina lasa alohan’ny ny maso-amin’ny famaranana ny fotoana ho an’ny sidina. Amin’ny toe-javatra manokana, eo ambany fifanarahana mialoha amin’ny Mpitondra, ny taty aoriana kilasimandry toy izany ireo mpandeha no raisina, fa na inona na inona toe-javatra tsy taty aoriana noho ny minitra mialoha ny fotoana niaingany voalaza ao amin’ny tapakila.
Ny mpandeha VIP-nitranga, amin’ny alalan’ny fiarovana ny fanaraha-maso tamin’ny fomba ofisialy delegasiona lounges. Raha toa ka tsy misy fanampiny hevitra ny fanaraha-maso tamin’ny fomba ofisialy delegasiona fandraisam-bahiny, ny mpandeha VIP-nitranga, amin’ny alalan’ny fiarovana ny fanaraha-maso ao amin’ny iray amin’ireo hevitra rehefa avy nandalo ny fitambaran’ny mpandeha mikoriana. Ny fepetra takiana ho an’ny nametraka ny fiarovana ny fombafomba fanaraha-maso dia mitovy tahaka ireo olon-tsotra ireo mpandeha.
Ny fepetra takiana ho an’ny nametraka check-in fombafomba ho an’ny mpandeha VIP dia mitovy tahaka ireo olon-tsotra ireo mpandeha.
Check-in dia ampiharina amin’ny VIP fandraisam-bahiny
Isaky ny tapa-entana dia voamarika amin’ny fanampiny»VIP»famantarana tag.
Tao amin’ny seranam-piaramanidina ny toerana mpandeha ny fandehanana amin’ny alalan’ny lounges ho an’ny mpiasam-panjakana sy ny delegationsVIP lounges no voalohany hiala ny fiaramanidina. Ny solontenan’ny Mitondra, na fahefana mpandraharaha mahafeno ny mpandeha tao anatiny sy ny manatrika azy ireo ny VIP fandraisam-bahiny. Entana voamarika amin’ny fanampiny»VIP»famantarana tag dia ho eny-mavesatra entana voalohany talohan’ny tapa hafa ny entana
NOTARY-BAHOAKA FAKAN-KEVITRA AN-TARIBY